Oniversiten’i Mahajanga: nifanafika ny samy mpianatra | Région Boeny
4 naratra, 02 voasambotra. Trano fonenan’ny mpianatra roa no may.
Ireo no vokatry ny fifanafihan’ny samy mpianatra teny amin’ny Campus universitaire an’i Mahajanga teny Ambondrona androany Talata 17 mai tokony ho tamin’ny 11 ora maraina teo.
Raha ny angom-baovao azo dia fifandirana teo amin’ny fikambanan’ny mpianatra avy eto Mahajanga sy ny mpianatra avy ao Mandritsara, faritra Sofia, samy mipetraka ao amin’ny Campus no nahatonga ny olana.
Ny herinandro lasa teo raha ny voalaza dia nanimba fantsondrano mandeha any amin’ny trano itoeran’ireo avy eto Mahajanga ny mpianatra iray tamin’ireo avy ao Mandritsara. Nisy fifamaliana tamin’izany, izay narahina fifanarahana fa hosoloin’ireto nanimba ilay fantson-drano simba.
Androany Talata 17 mai tamin’ny 9 ora maraina no nifanarahan’izy ireo fa hanoloana azy io. Tonga avy any nefa ireo mpianatra terak’i Sofia, miisa eo amin’ny 300 eo ho eo, miaraka amin’ny fitaovana enti-miady sy ny vato, hanafika ireo mpianatra terak’i Mahajanga miisa eo amin’ny 80 eo ho eo.
Raikitra ny fifanafihana, nisy ny doro-trano fonenan’ny mpianatra.
Vokany: mpianatra efatra no naratra mafy nampidirina eny amin’ny hopitaly PGaZa Androva. Ka roa avy amin’ireo mpianatra terak’i Mahajanga, ary roa avy amin’ireo terak’i Mandritsara. Roa hafa voasambotry ny mpitandro filaminana, izay samy avy any Mandritsara avokoa.
“Bloc” roa kosa no may, ka ny iray dia simba tanteraka, na dia nalaky aza ny fahatongavan’ny mpamono afon’ny Faritra Boeny sy an’ny Kaomina ambonivohitr’i Mahajanga.
Nidina eny an-toerana io hariva io ireo solotenam-panjakana tarihin’ny lehiben’ny OMC (Organisation mixte de concéption) eto Mahajanga hijery ny fahavoazana sy hitondra fandaminana.